Dutchtown တွင်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောတနင်္ဂနွေ• DutchtownSTL.org • Dutchtown, St. Louis, MO
အပေါ် Posted ဧပြီလ 2nd, 2021
မတ်လ၏နောက်ဆုံးစနေ၊ တနင်္ဂနွေနေ့တွင်စိန့်လူးဝစ်တစ်လွှားမှ Dutchtown စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အိမ်နီးချင်းများနှင့်စျေးဝယ်သူများအားကျွန်ုပ်တို့၏ရပ်ကွက်အတွင်းရှိခိုင်မာသောအသိုင်းအဝိုင်းကိုထူးခြားစွာပြသနိုင်ရန်အတွက်စုရုံးခဲ့သည်။ တေးဂီတ၊ အစားအစာနှင့်ပျော်စရာများကလူတန်းစားအသီးသီးမှလူများအား Dutchtown ၏လမ်းများသို့ခေါ်ဆောင်သွားသည်။
Dutchtown Spring Sidewalk ရောင်းရန်
သောကြာနေ့နဲ့စနေနေ့မှာစခဲ့တယ် Dutchtown Spring Sidewalk ရောင်းရန်Meramec လမ်းသုံးဖက်ရှိဈေးဆိုင်များ၊ စားသောက်ဆိုင်များ၊ ရောင်းချသူများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများဒါဇင်ဒါဇင်ကျော်ပါဝင်သည်။ ထပ်ခါတလဲလဲစျေးဝယ်သူများနှင့်ဖောက်သည်အသစ်များသည်မယုံနိုင်စရာကောင်းသောအပေးအယူများနှင့်ထူးခြားသောအရသာများကိုရှာဖွေရန်စုရုံးခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါတနင်္ဂနွေရောင်းချမှု၏ပိုင်ရှင်များကစီစဉ်ခဲ့သည် Kwamboka, Logan ၏ကလေးများပြန်လည်ရောင်းချခြင်း, နှင့်မှတဆင့်စုစည်းစတင်ခဲ့သူကိုအခြား Dutchtown စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်တွေ Dutchtown စီးပွားရေးခရိုင် Facebook အဖွဲ့။ အတူတကွအလုပ်လုပ်ကြသည့်ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်နီးချင်းလုပ်ငန်းရှင်များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ eclectic Downtown Dutchtown ဆိုင်များကိုပြသခြင်းအားဖြင့်မှတ်ပုံတင်များကိုမြည်နေစေခဲ့သည်။
ဤအတောအတွင်း Urban Eats Neighborhood Food Hall ရှိအစားအစာရောင်းချသူများသည် Dutchtown တွင်သာတွေ့နိုင်သောအရသာရှိသောဟင်းလျာများကိုခင်းကျင်းပြသခဲ့ကြသည်။ Black ကကော်ဖီ နှင့် Pasုံ pastry ဈေးဝယ်ထွက်တဲ့နေ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီပေးခဲ့တယ်။ Juanita's Creole Soul Café ထွက်ရောင်းသည်အထိကျေနပ်အစာအိမ်။ ပြီးတော့ Tacos la Jefa သူတို့ရဲ့ထူးခြားတဲ့ birria tacos, quesadillas နှင့် nachos ပျော်မွေ့ရန်ဒေသတစ်ဝှမ်းမှအစားအစာများကိုယူဆောင်လာခဲ့သည်။
အိမ်နီးချင်းအဖွဲ့အစည်းများသည် Dutchtown တွင်တိုးပွားလာနေသောအရှိန်အဟုန်ကိုကြေငြာရန်နှင့်အိမ်နီးချင်းများအားပါ ၀ င်ရန်စုဆောင်းခြင်းကိုပြုလုပ်နေသည်။ DT2 • Downtown Dutchtown, ရောဂါပျောက်ကင်းအကြမ်းဖက်မှု, သောမတ်စ် Dunn သင်ယူရေးစင်တာနှင့် Dutchtown တောင်အဝန်းကော်ပိုရေးရှင်း ပတ် ၀ န်းကျင်ဆိုင်ရာအစီအစဉ်များနှင့်အရင်းအမြစ်များနှင့်ပတ်သက်သောစကားလုံးများကိုဖြန့်ဝေရန်အားလုံးကကူညီပေးခဲ့သည်။
စနေနေ့မှာ, Grand Cross စျေးဝယ်သူများနှင့်အိမ်နီးချင်းများက Meramec ကိုလမ်းလျှောက်နေရင်း Easter Bunny ကို Downtown Dutchtown သို့ကလေးများ၊ လူကြီးများနှင့်အတူဓာတ်ပုံများယူဆောင်လာသည်။ ပူနွေးသောရာသီဥတုကြောင့်ဒုတိယမြောက်နေ့တွင်ရပ်ကွက်သို့ visitors ည့်သည်များအပါအ ၀ င်စျေး ၀ ယ်သူများကိုခရိုင်သို့ပို့ဆောင်ခဲ့သည်။
စနေနေ့အစောပိုင်းကအိမ်နီးချင်းအများအပြားသည်စုဝေးခဲ့ကြသည် Marquette ပန်းခြံ အချို့သောနွေ ဦး သန့်ရှင်းရေးအဘို့။ စေတနာ့ဝန်ထမ်းများသည်လက်အိတ်များကို ၀ တ်ဆင်ပြီးဆောင်းရာသီရှည်လျားသောစုဆောင်းထားသည့်အမှိုက်အချို့ကိုကိုင်တွယ်ရန်သူတို့၏ grabbers များကိုဖမ်းယူခဲ့သည်။ နွေ ဦး ပေါက်ရာသီနှင့်အတူပန်းခြံသည်အလုပ်များသောရာသီမစတင်မီအလွန်လိုအပ်သောသန့်ရှင်းရေးကိုရရှိခဲ့သည်။
Marquette အဝန်းနေ့ Kickball ပြိုင်ပွဲ
အဆိုပါ Marquette အဝန်းနေ့ Kickball ပြိုင်ပွဲ တနင်္ဂနွေ, မတ်လ 28 ဘို့စီစဉ်ထားခဲ့သည်။ သို့သော်အမြဲတမ်းလေပြင်းများနှင့်လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုများကြောင့်ရာသီဥတုသည်အလွန်ခင်မင်ဖွယ်ကောင်းသောဂိမ်းများအတွက်အနည်းငယ်ခက်ခဲသည်။
ဒါကြောင့်Aprilပြီလ ၁၁ ရက်အထိဂိမ်းများကိုရွှေ့ဆိုင်းလိုက်သည်။ ဒါပေမယ့်နေ့ကနေသာနေတုန်းပဲ၊ လက်တစ်ဖက်မှာရှိတဲ့ DJ သမားတစ် ဦး နှင့်ကြက်ဟင်းခါးသီးများနှင့်ချက်ပြုတ်ရန်အဆင်သင့်ကြက်သားတောင်ပံများနှင့်အတူအိမ်နီးချင်းများသည်တစ်နေ့လုံးအသုံးချရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။
အစောပိုင်းရောက်ရှိလာခဲ့သည့်အသင်းများအကြားလက်ငင်းလက်မရှိ၊ ယခုတရားဝင်ပြိုင်ပွဲဖြစ်သည့်အခါ Marquette ရှိကွင်းကွင်းကွင်းကွင်းကွက်ကွက်များနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်း ၀ င်လာသောအခါကစားသမားများသည်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည့်အားသာချက်ရှိသည်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင်တောက်ပနေသောနေ့၏သူရဲကောင်းသည် the ည့်သည်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးပန်းခြံသို့စွန်များကိုသယ်ဆောင်ကာတက်ရောက်နေဆဲရှိကလေးများ (နှင့်လူကြီးများ) ကိုမျှဝေသည်။ လေယာဉ်မှူးများသည် Field House ဘေးရှိပွင့်လင်းသောတောင်ကုန်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးသူတို့၏ကံကြမ္မာသည်ကောင်းကင်သို့ဖြတ်ကျော်သွားခဲ့သည်။
အိမ်နီးချင်းဒါဇင်အနည်းငယ်သာအအေးမိသောလေကိုဆက်လက်တိုက်ထုတ်နေသဖြင့်ဂီတနှင့်အသားကင်မီးခိုးများကပန်းခြံကိုပြည့်စေခဲ့သည်။ ကလေးတွေကအတူတူကစားတယ်၊ လူကြီးတွေအတူတူကခုန်ကြတယ်၊ ပြီးတော့ဆယ်ကျော်သက်တွေတောင်သူတို့ကိုယ်သူတို့ပျော်မွေ့ကြတယ်။
မွန်းလွဲပိုင်းတွင်အဆင့်မြင့်အပျော်တမ်းအဖွဲ့များစုံတွဲတစ်တွဲတက်ရောက်ကြသည် Marquette ပန်းခြံဘောလုံးကွင်း ပွဲတစ်ပွဲအတွက်။ ပရိသတ်များသည်ဂိမ်းတွင်ကစားရန်ပန်းခြံ၏အစွန်အဖျားများပတ်ပတ်လည်တွင်စုရုံးခဲ့ကြသည်။ Marquette ရှိတနင်္ဂနွေနေ့လည်ခင်းများတွင်ပုံမှန်ဖြစ်ပျက်ခြင်း။ Marquette ပန်းခြံ၏မဟာမိတ်များ ရှည်လျားစွာအသုံးပြုမှုအရှိန်မြှင့်ရန်အဘို့အကြာမြင့်စွာတွန်းအားပေးခဲ့ကြနှင့်မျှော်လင့်အချို့သိသာထင်ရှားသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမိုးကုပ်စက်ဝိုင်းအပေါ်ဖြစ်ပါတယ်မျှော်လင့်ပါတယ်။
ဒီတော့ဒီတနင်္ဂနွေမှာ Dutchtown မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တာပါ။ မင်းအဲဒီမှာရှိမယ်လို့ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် သို့သော် အကယ်၍ သင်လွဲချော်ခဲ့လျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏တမူထူးခြားသည့်ဆိုင်များသို့သွားရောက်ခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏စားသောက်ဆိုင်များကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏ပန်းခြံတွင်အနားယူခြင်းအားဖြင့်တောင်ဘက်ခြမ်းတွင်စနေ၊ တနင်္ဂနွေများကိုအများဆုံးပြုလုပ်နိုင်သည်။ အပေါ်မျက်စိစောင့်ရှောက်လော့ Dutchtown ဖြစ်ရပ်များပြက္ခဒိန် ပိုပြီးအထူးဖြစ်ရပ်များအတွက်, ဒါမှမဟုတ်ရုံအချိန်မရွေးလာရောက်လည်ပတ်လာ!
စကားမစပ်, မှာများစွာသောဓာတ်ပုံများတစည်းရှိပါတယ် DutchtownSTL Flickr စာမျက်နှာ။ ကနေနောက်ထပ်ဓါတ်ပုံတွေကိုကြည့်ပါ လမ်းဘေးရောင်းချခြင်း, Marquette ပန်းခြံ၌တနင်္ဂနွေ, ဒါမှမဟုတ်ရုံလှည့်ပတ် browse ။
အောက်မှာ Filed Dutchtown ဖြစ်ရပ်များ. အမျိုးအစားအားလုံးကိုပြပါ. စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား, ဒိန်းမတ်, Dutchtown CIDနှင့် Dutchtown ဖြစ်ရပ်များ. အမျိုးအစားနည်းနည်းပြပါ.
ဒီ post ကိုမျှဝေပါ Facebook က, တွစ်တာဒါမှမဟုတ် အီးမေးလ်လိပ်စာ။ ဒီ post ကိုနောက်ဆုံးပေါ် update လုပ်ခဲ့သည် ဧပြီလ 2nd, 2021 .
ဒိန်းမတ် Dutchtown ဖြစ်ရပ်များ Dutchtown အတွက်အံ့သြဖွယ်တနင်္ဂနွေ